Iwebhusayithi ividiyo Dating nge kubekho inkqubela - IVIDIYO INCOKO-Uthando-intanethi!
Free kwaye abarhwebayo izibhengezo kwi-Germany. Isebenza kwaye abahlala e-Germany
eyona ngxaki - akukho kubekho inkqubela kuba budlelwane
Ndine wahlala Sasejamani iminyaka emininzi, ndine enomsila, umsebenzi, phantse yonke into kuba ngokupheleleyo ubomi, ezinye izinto ndenzayo ngaphezu abaninzi iintanga zam, mna musa ukusela okanye ukutshaya, ngendlela ilizwi, ngaphandle engalunganga imikhuba, kodwa kwi nokukhubazeka (ngocoselelo esisiqhwala kwaye drooling ilizwi)eyobuhlobo, enyanisekileyo kwaye esinenkathalo, romanticcomment, mna uthando ukunika iintyatyambo, romanticcomment umculo kunye candles. Ndibathanda indalo nabantwana, kakhulu elinovakalelo, kwaye njengokuba benditshilo, ndiyazi ukuba ndiya uthando kwaye kunika yonke into ukususela ngokwam ukuba abantu.
vula ukuba budlelwane nabanye.
wobulali Germans ingaba ukukhangela beautiful kwaye otyebileyo. (saye hayi kwenzeka Sasejamani kuba akukho nto), kwaye natives ka-Germany - le yindlela eyahlukileyo mentality. kwaye ulwazi kwi-Intanethi, a banqwenela ukuba rely kwi zimbini iindlela zophuhliso, passion, mutual ukuqonda. kwaye ufuna ukuqala budlelwane kwi-Intanethi, ngoko ke hambisa real i-madrid, ngoko ke rare ubomi iiseshoni, wada yena lugqiba ukuba yiya ku-Germany. Ewe, ndiyazi ukuba kukho kwelinye ilizwe, omnye ulwimi, ezinye masiko, kodwa kulula ukuhlala kunye njengoko omnye, kwaye kulula ukuba koyisa iingxaki. ke malunga wanting ukuba ube kunye a wayemthanda omnye. Ngokubanzi, le meko ayikho lula. kodwa mna sele ingaba amashumi amathathu eminyaka. kweminyaka okokuba.
kwaye get watshata Edenmark, ukuba ke ngxi kugqitywe
Kakhulu ukudinwa ka-loneliness nabafazi ke, imidlalo. nomdla umnqweno kuba uzinzo ukunika warmth kwaye affection, hayi necessarily eziphela ngesondo (nangona kolu luvo yonke into kakuhle). Ndinqwenela ukufumana kubekho inkqubela abo akuthethi ukuba ufuna ukudlala, yiza kuhlala nam, ubuncinane, phambi guests. Ndiyaqonda ukuba le kakhulu, kuba ndiyazi ukuba loluphi uhlobo umfazi iimpukane (okanye iza) ukuba umhlobo kwi Internet, apho indoda isiza, yena uya kanjalo ahlawule kuba icacile ticket (yena kuya kufuneka ihlawulwe phezu arrival), kodwa ukuba yena agrees nokuphila kwaye siyasebenza, kwaye ukuba, ukususela yindlala kwaye akazange kulala, yena akayi. kwaye ndiya ukulungiselela wam leisure ixesha kunye naye. Ngoko ke, nkqu ukuba ke kunjalo, mna unako ukufumana hotel igumbi ukuba yena akuthethi ukuba ufuna ukuhlala ndawonye. ngoko ke, musa woyikayo ka-umngcipheko kwaye uxanduva kuba kum, Ewe, ndiya kuba noxanduva kwenu) ukuze kubekho inkqubela, usapho lwam, ngamanye amaxesha akusebenzi jonga impilo ka-athletes, ngenxa yokuba uza kuphila kunye umphefumlo, singena umzimba. umphefumlo ngu obungunaphakade kwaye kwi street.
noko kuba nam.) kuphela ubuhle kusapho ubomi ayikho ebalulekileyo, ukuba umntu uza kuba besoyika okanye into yena akakwazi ngathi.
kodwa umphefumlo ngu osibekeleyo kwaye ezibuhlungu. ngenxa yokuba akukho namnye unako hug kwaye nje cofa, ndithi enkosi ekubeni kukho kuba nam. kwaye yenza wena ndonwabe. Ndijonge kuba sociable kwaye esebenzayo umfazi, nje kuwe ezinzima attitude.
Ndingumntu eqhelekileyo isijamani, kulungile-coordinated complexion, ndine lemfundo ephakamileyo ukuze ndibe efunyenwe kwi-Moscow.
Ndiya kukhokela esebenzayo ukuzonwabisa (ndibhala poetry, thatha iifoto. Ndifuna ukuhamba ihlabathi, ngamanye amaxesha ndim kwimishini), anditsho ukutshaya, mna kuyanqaphazekaarely basele iwayini kwaye champagne elungileyo inkampani, elinovakalelo, ukuqonda, sweet, romanticcomment, mna uthando indalo nabantwana, umntu ngubani owaziyo njani uthando kwaye appreciate umfazi. thina urgently kufuneka ngakumbi into eqhelekileyo, hayi i-omdala, ngaphandle kubekho inkqubela (oku kunokwenzeka kunye umntwana), kodwa apho kukho spark ka-ukuthamba kwaye umnqweno ukuze ndonwabe, ukuba sithande kwaye kuba wamthanda. i-babuza ubudala ukuze kubekho inkqubela ngu iminyaka kwaye kufuneka ube banqwenela ukuba babelane (kunye nokuqheleka abantwana), ndiya kukuxelela vetshe malunga kwento yonke, ukuba ngokwembalelwano.
Mna ke kakhulu ukudinwa yokuba yedwa kwaye ukudlala imidlalo.
Ndiza nje ikhangela a ezinzima budlelwane. kwaye Ewe, ukuba awutshatanga, okanye atshate kwaye kufuneka acquaintances, abahlobo, girlfriends, nabo, omnye girls, kodwa ingaba disappointed yi-loyalty kwaye uthando ukusuka umntu, kodwa endaweni yoko disappointed, ukudinwa ka-ukukhangela.
nceda bonisa umyalezo wam.
Ndiya kuba ndonwabe kakhulu kuba na uncedo nenkxaso. Umfazi, ndifuna ukuba angenise ukuba i-honest umntu othe ezinzima intentions iminyaka emininzi ezayo. Uncedo imilo ubomi ngokusekelwe mutual ngokubhekiselele kwaye uthando. Ndibathanda socializing, indalo, izilwanyana, kwaye nkqu igadi okanye neighborhood ka-Berlin. Ndingumntu uhlobo kwaye esinenkathalo umfazi, kwaye ndinqwenela ukuba ahlangane umntu-ubudala ukuqala usapho. Iminyaka engama-ingqalelo kwaye uthando. Ndiza ilinde yakho ngefowuni. Ndine leric kwaye ndim liphila, ndinqwenela ukuba ahlangane a ezinzima kwaye reliable umntu - iminyaka ukuba isicwangciso ukuba ndine usapho. Andisoze kuba ndonwabe ukuthatha yakho umnxeba. Na injongo, Lerik, ndinguye amashumi amathathu anesine ubudala, ubude, ubude, emidlalo-Siseko, ukukhanya, umsebenzi, musa ukutshaya, ndiphila kufutshane-Berlin, a isijamani ummi. Kuhlangana a kubekho inkqubela kwi-Berlin okanye yayo surroundings, kanjalo hayi nje ukusuka Kwakhona.
Ndijonge kuba mnandi, modest, slender kubekho inkqubela phantsi amathathu eminyaka ubudala.
Ukubhala Viber kwaye mna ekhangele phambili ndibona wena.
Ndingathanda kuhlangana a ezinzima, balanced umntu, reliable kwaye, ngaphezu kwazo zonke, a BATHAMBE UMNTU.
Noko ke, kubaluleke kakhulu kuba kum okokuba zam endizithandayo mini umdla, fun, spontaneous, nkqu a loyal iqabane lakho. Wam imisetyenzana yokuzonwabisa ingaba i-opera, theater, exhibitions, amaziko olondolozo lwembali, abajikelezayo, kwaye usapho friendships. Ndinguye amashumi amathathu ubudala, mde, nzima, baze baphile kwi-Berlin.
Ndijonge kuba beautiful, slender kubekho inkqubela phantsi amathathu kuba elungileyo budlelwane kwaye iqala usapho.
I kubekho inkqubela appreciates ukuthamba, openness kwaye ububele. Ezinye iinkcukacha ezifumanekayo kwintlanganiso. Akunyanzelekanga ukuba rhoqo kuba khetho ukuphendula umnxeba, ngoko ke ngcono ukubhala nam ke boy ulwimi. Ndinguye young, omnye, ngaphandle kwabantwana, watshata na i-EU ummi, ndiyazi ulwimi, musa ukusela okanye ukutshaya. Amashumi amathathu kilos, ukukhangela kuba uqinisekile umphefumlo mate ngubani owaziyo ntoni yena ufuna ngaphandle ubomi. Ukuba ulungele ukuya nge-umlilo kwaye amanzi, thuma mna umyalezo efowunini kunye kancinci ibali malunga nawe. Ke nje, nceda musa inkunkuma yakho ixesha zam. Kuphela kuba ezinzima elide ubudlelwane a amathathu ukuba amane unyaka ubudala umahluko amashumi amane anesihlanu eminyaka ubudala. Traffic kwaye umgama kuba European Union kuba akukho ngxaki kuba nam. Uyakwazi ukuza okanye yiya. I-exchange ka-iifoto enxulumene ebalulekileyo ad ingu uyabonakala kwi-site. Wam ifowuni inani zidweliswe ngezantsi, umnxeba kwam ngomhla we-bam iselula okanye idilesi ye-imeyili kwam ngomhla VIBER, okanye ndim optimistic malunga elizayo kwaye ukuba ndiya kuba nako ukuhlangabezana Wam Uthando apha. Ndinguye icimile kwaye ekhaya ka-umfazi abo osetyenziselwa kuphila kwi-usapho.
Ndijonge kuba umntu ngubani owaziyo njani zikhathalele umfazi ke, ukuthamba.
Ndinguye kakhulu esebenzayo kwaye cheerful. Ndithanda abajikelezayo, caravans, indalo, ihlathi, lake, iintyatyambo, igadi, cottage, fishing, ulwandle, amalwandle, guitar, alaphukanga umlilo. Ndithanda umsebenzi, umfazi ke, urhwebo, elungileyo cook.
Ndinguye ninoyolo ukuba zikhathalele indlu, knit, sew, yenza vases kwaye lwamashishini amancinci izipho, ukwenza cozy-bume.
Kukho encinane kakhulu umntwana (iminyaka), ndingumntu umhlolokazi.
Ndine zonyango enomsila. Ndifumana ngaphandle kweli madhouse kuyo yonke indawo. Kodwa hayi kuba nabani na ongomnye. Kakhulu nzima fin.
Ewe, baya kufuneka inkxaso - nomdla kwaye reliable shoulder womntu, i-omdala ngubani musani ukoyika ka iingxaki, ngubani ukulungele ukuya kuma phezulu kwaye uzive ngokwaneleyo mental kwaye zomoya ukomelela nyusa a boy babe a real umntu.
Gentlemen, kuphela real-ixesha ngxelo, nceda. Ukuba ufuna musa ufuna ukuthatha uxanduva, wena bakholisa na ukugcina izithembiso zakho ukuze ube musa ufuna ukugcina, okanye wena musa cinga oko kufanelekileyo ukubonelela ngenkxaso uncedo ukuze umfazi ngubani kwi kunzima imeko, ukuba usenama-kuba abanye elidlulileyo budlelwane nabanye okanye izibophelelo kwindawo apho uhlala khona okanye musa ufuna umsebenzi, ngoku kwaye kusenokwenzeka kamva kwixesha elizayo. HAYI, nceda musa ukubhala apha, musa ukuthatha zam kwaye musa inkunkuma yakho ixesha, incoko yakho mna uphumelele ukuba kufuneka kudla a belambile umntwana. Andikho hiding nantoni na okanye nabani na: ndifuna ukuba ushiye kweli lizwe msinyane kangangoko kunokwenzeka, preferably ukuba sithande kwaye bathambe umntu.
Le yinyaniso, kodwa inani ladies asiyiyo yonke, kuphela kwi-personal ngokwembalelwano.
Ndiza ngenene ukulungele ukuya kuhlangana nani. Ukuba awunokwazi mema kuthi Entsha konyaka, wena musa nkqu kufuneka bakhulise wokuqhawula umtshato, omdala abantwana bahlale kwi-France, Usirayeli, kwaye St.
A ibhityile, emfutshane, umdla umntu.
Ewe-a ezinzima, elizimeleyo, omnye amathandathu-yeminyaka ubudala umfazi ka-amane anesihlanu eminyaka, ujonge kuba umntu ukusuka Moscow, St. Marengo okanye i-Berlin, iphelelwe phakathi amane ngamashumi amahlanu eminyaka kuba ezinzima budlelwane okanye iqala usapho.
Ndiphila kwi-umbindi we-Berlin, ndifuna umsebenzi, ndinguye ngokupheleleyo adapted, ndithetha fluent isijamani, ndinguye charming, nge-i-o kwaye x-y.
Ndijonge kuba yinyani Iqabane lakho kwi-Berlin.
Kuba massage, Jikelele leisure.
Ulwazi olongeziweyo. Ndiyathemba kwaye linda. Malunga nam: akukho engalunganga imikhuba. Pretty amashumi amathathu anesibini-yeminyaka ubudala, financially elizimeleyo kubekho inkqubela, elungileyo hostess nge charming ezintathu -yeminyaka ubudala intombi, ujonge kuba indoda kuba ezinzima budlelwane nabanye, honest, zalo lonke udidi, reliable kwaye elinovakalelo, ilungile ukuqala usapho. Ezandleni zakho ndingathanda ukuva umfazi kwakhona, mna uthando. Kwi-kubuyela, ndiya kuninika uthando, warmth kwaye intuthuzelo ekhaya. Ukubhala malunga ne-Berlin yayo, surroundings kuphela kunye ezinzima intentions. Oxhalabileyo kwaye engenanto talkers. Akunyanzelekanga ukuba inkunkuma ixesha. Akunyanzelekanga ukuba ngathi engqongqo iimfuno Kuba okulungileyo, enobulungisa, kubekho inkqubela okanye umfazi, cheap, okulungileyo, kunye amatsha na ethe-ethe intliziyo yakho, ukwazi ukuba sithande kwaye kuba wayemthanda, alikwazi ukwahlula lula, kwaye ngoko ke ukuba glplanet adrenaline rushes kwi umzimba, kuyo yonke iseli. Ukusuka apho siya kusoloko relax, kwaye apho ndithanda hug kwaye asazanga. Ndifuna a eshushu budlelwane ngokusekelwe reciprocity, ngaphandle hlawulela kwaye lies. Kwi nani kuba okulungileyo indalo, kancinci uphill, mna uthando ehamba, mna uthando zizilo zehlathi, indalo, ukuhamba. Alikwazi ukwahlula kwi-alphabetical olungcwele, kodwa akunyanzelekanga ukuba ufuna ukuba ibe sponsor. Ixesha elide edlulileyo, kufuneka accumulated ezininzi uthando nobubele ukuba ufuna ukunika ukuze kubekho inkqubela okanye umfazi abo baya appreciate kwaye baqonde oko, ngenxa yokuba ubomi ngaphandle uthando uyaphulukana intsingiselo yayo. Ukuba ukulungele ukwenza uthando entliziyweni yakho, nika kwaye kufumana ulonwabo-bhala. Emva emva kokuba oku kwenzeka, kukho inyathelo phambi ulonwabo. Mna ngenene bekholelwa sithande umntu. Akuyi kuba akukho ubutyebi. Kodwa ndinako isithembiso uthando kwaye loyalty. Yintoni uthando, xa sukuba ufuna enye zonke ezinye iintlobo uthando flirting, xa sukuba ufuna umntwana ufuna kwento yonke ehlabathini sympathy amagqabi ezininzi umona kwaye flattery kwi-wonke vital icala uthando, xa sukuba ufuna ukuba ube kunye kwento yonke nje a habit ka-ukuvumela ububi ukuba yonke into ayiyo namesti kwenzeka ntoni ebomini bakho udinga uthando, xa isibini iintliziyo zi kunye kwento yonke ngu friendship.
de vergaderingen met de Duitsers, Duitsland
ngesondo dating ividiyo incoko roulette free esisicwangciso-mibuzo roulette kubekho inkqubela-intanethi kuba free ividiyo incoko roulette ubhaliso ividiyo Dating zephondo ukuphila ngesondo Dating omdala Dating iwebhusayithi ukuya kuhlangana nawe ividiyo incoko-intanethi free umfazi ifuna ukuya kuhlangana ads